Global Voices teny Malagasy » Any Brezila, filaharana handresena ny tahotra ary hitolomana ho an’ny zon’ireo mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Desambra 2018 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra MigraMundo Nandika (fr) i Annick Battesti, Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zon'olombelona
Niady hevitra momba ny olan’ny mpifindra monina tonga ao Sao Paolo ny Vaomiera miaro ny zon’olombelona araka ny mpanolontsaina monisipaly Juliana Cardoro (PT) , izay mpikambana ao anatin’ity filankevitra monisipaly ity ihany koa. ‘’Mazava fa tsy misy teti-bola ho an’ity resaka zon’olombelona ity, indrindra moa fa ho an’ny fandrindrana ny mpifindra monina’’ hoy izy.
Tahaka an’i Florencia, nizara ny hafany tamin’ireo olona samihafa i Remberto. Nivoaka mpandresy  tamin’ny Fetiben’ny Mozika sy ny Poezia ho an’ny mpifindra monina faha-7 izy. ‘’Ny atao hoe mpifindra monina dia tsy fanandevozana fotsiny ihany, na fijaliana fotsiny ihany, fa fifaliana sy fahasamihafana ihany koa. Tonga eto izahay mba hanome fitiavana sy fifaliana, ary ny tenako no porofon'izany’’.
Raha hiresaka momba ny filoha vaovao Jair Bolsonaro- izay efa nihevitra ireo mpifindra monina ho toy ny ‘’fako ’’, dia tsy adinony ny naneho tsikitsiky mba hanehoany ny fanoherany. “Tsy fantatra izay hitranga amin’ny governemanta vaovao. Tena matahotra roa avo heny aho amin’ny maha mpifindra monina LGBT ahy’’ hoy ny fehin-tenin’i Remberto.
Tamin’ireo sakana rehetra izay tsy maintsy noresen’ireo mpikarakara  dia avy any amin’ireo manampahefana no ratsy indrindra izay nanemotra ny fanomezan-dalana ary nametra ny hetsika ho amin’ny toerana tena voafetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/31/132129/
 Nivoaka mpandresy: https://migramundo.com/diversidade-e-clamor-por-fronteiras-livres-marcam-festival-cultural-de-imigrantes/
 Tamin’ireo sakana rehetra izay tsy maintsy noresen’ireo mpikarakara: https://migramundo.com/marcha-dos-imigrantes-vai-a-paulista-para-enfrentar-medos-e-retrocessos/